စားသောက်ဆိုင် Dinnerware လက်ကား | ၂၈ ကြွေထည်
Vosive နှစ်ခုရှစ်နှင့်အတူ Dine ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူ Dine
အစားအစာသည်စားဖိုမှူးများနှင့်လူများကိုအတူတကွဆောင်လာသည့်အဆုံးစွန်သောအတွေ့အကြုံများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချည်းနှီးသောအရောင်2ခုမှမုတ်ဆိတ်မွေးများနှင့်ဖလားများအစက်များသည်ဤနွေးထွေးသောစိတ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးစားဖိုမှူးများ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်ကိုက်ညီကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုတွေ့မြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆွဲဆောင်သည်။
TEXTURE COLLECTION - ၂၀၂၁ စားသောက်ဆိုင်ဟိုတယ်အတွက်ဒီဇိုင်းအသစ်မြင့်မားသောအပူချိန်မြင့်မားသောကြွေထည်ထည်ထည်ပစ္စည်းများထူးခြားသောဒီဇိုင်းကြွေထည်ပစ္စည်းများ
အနီရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်ရှိသည့်ထူးခြားသောစားပွဲ၊ မွေ့ယာနှင့်တောက်ပသောမျက်နှာပြင်၊ ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနှင့်အတူသင့်စားသောက်ဆိုင်စားပွဲများကိုအစားအစာဖြင့်အလှဆင်နိုင်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောစားဖိုမှူးများ၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ကျေနပ်အောင်။
Copper Blue - Morden Style Gradient Gre en Glossy ကြွေထည်စားသောက်ဆိုင်ထုံးစံအတိုင်းလက်ကားရောင်းချသည်။
Reactive color glaze သည်ဤစုဆောင်းမှု၏တောက်ပသောအရောင်ဖြစ်သည်။ ဒီစားသောက်ဆိုင်သစ်မှာထမင်းစားခန်းအသစ်၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးပါ ၀ င်ပါတယ်။
LOTUS BLUE - ၂၀၂၁ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်အပြာရောင်ကြွေထည်ပစ္စည်းများ၊ မှန်ကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်ဖန်စီထားသောကြွေထည်မြေထည်၊
အသစ်နှင့်ထူးခြားသည့်အပြာရောင်ကြွေထည်ထမင်းစားခန်းတစ်ခုမှာ၎င်းသည်အပြာရောင်ကောင်းကင်အရောင်နှင့်သာမကစင်ကြယ်သောအပြာရောင်သမုဒ္ဒရာနှင့်ရောနှောပေါင်းစပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ, သင်၏အစားအစာအရသာနှင့်ကောင်းသောကြည့်ရှုပါ။
GREEN JUNGLE - လူကြိုက်များသော Rustic စတိုင်အစိမ်းရောင်ကြွေထည်မြေထည်ကြွေထည်ပစ္စည်းများ၊ အဆင့် AB စားသောက်ဆိုင်အတွက်ကြွေထည်ပစ္စည်းများ
နယူးအစိမ်းရောင်စားသောက်ဆိုင်လက်ကားပြား။ အရှေ့တောင်အာရှစျေးကွက်စားသောက်ဆိုင်အတွက်အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးသောထမင်းပေါင်းအိုးအမျိုးမျိုး။ ၎င်းတို့သည်တာရှည်ခံ။ ပန်းကန်ဆေးစက်နှင့်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်အတွက်လုံခြုံသည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးအမျိုးအစားအတွက်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်ပါက - မော့စ်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းနေရသော0န်ဆောင်မှုကိုဤအကြံအစည်ကိုပြည့်စုံစေပါစေ။
1. စုံစမ်းရေးကော်မရှင် - သုံးစွဲသူသည်ရုပ်ပုံကို ပေး. ဒြပ်စင်သတ်မှတ်ချက်, အတိုင်းအတာများ,
2. ဒီဇိုင်း - ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်သင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်ပတ်သက်သောသင်၏အတည်ပြုချက်အတွက် 3D ပုံရိပ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးနမူနာများတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အကောင်းဆုံးထုံးစံဒီဇိုင်းထုတ်ကုန်များကိုသေချာစေရန်စီမံကိန်း၏အစမှပါ0င်သည့်အဖွဲ့သည်စီမံကိန်း၏အစတွင်ပါ0င်သည်။
4. အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု - အရည်အသွေးမြင့်အဆောက်အ ဦ များကိုဖြန့်ဖြူးရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုကိုအဓိကပြုသည်& ထိရောက်သောအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာဖောက်သည်တိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုသူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အတူသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးယုံကြည်မှုရှိစေရန်သေချာစေရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုတိကျစွာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးဖြင့်ဖြည့်ဆည်းရန်ဖြစ်သည်။ Prooerties.Hotel, စားသောက်ဆိုင်, ပေါင်းပင်များ, ပွဲ,
White Tableware Collection သည်ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခန်းစီအတွက်လိုအပ်သောအရာများဖြစ်သော Lobby, Buffet, အထူးစားသောက်ဆိုင်၊ Main Dinning, Bar စသည်တို့နှင့်ကိုက်ညီသည်။အသေးစိတ်အတွက်ဆက်သွယ်ရန်
အရောင်စားပွဲတင်ပစ္စည်းများစုဆောင်းခြင်းသည်မတူကွဲပြားသောစားသောက်ဆိုင်၊ မီးပုံ၊ ယူရေနီယမ်စုဆောင်းခြင်း၊ မြူစုဆောင်းခြင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီသည်။သင်၏စစ်ဆေးမှုအတွက်စားသောက်ဆိုင်ကိစ္စပိုမိုလုပ်ရန်
Hosen Two ရှစ်ကြွေထည်များသည်ထုပ်ပိုးမှုအတွက်ထမင်းစားချိန်ကိုအထူးသဖြင့်အစုတစ်စုလျှင် ၁၈ ခု၊ တစ်စုံလျှင် ၂၄ ပြားဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလုံခြုံသောအထုပ်ထဲတွင်ထုပ်ပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းရောင်းချမှုကာလအတွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေပါ။
စတုရန်းမီတာ 30,000 နှင့်အတူကုမ္ပဏီသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့, ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမြင့်မားခြင်း, ရိုးရာလက်မှုပညာနှင့်ခေတ်သစ်နည်းပညာပေါင်းစပ်မှုနှင့်အတူကြွေထည်ရှစ်ခုနစ်ခုသည်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များဖန်တီးရန်နှင့်အနုပညာပုံစံကိုရှာဖွေခြင်း၏မူဝါဒကိုလိုက်နာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မတူညီသောဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အခွင့်အရေးများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Jane Lee မှာအရောင်းအရောင်း